မိဘတွေကို မပြောသင့်တဲ့ စကား(၁ဝ)ခွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မိဘတွေကို မပြောသင့်တဲ့ စကား(၁ဝ)ခွန်း
Posted by တိမ်မည်း on Sep 17, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
(၁) အင်းပါ! အင်းပါ! သိပြီ… အရမ်းရှုပ်တာပဲ!
(မိဘတွေဖုန်းဆက်တာ စကားပြောချင်ရုံသက်သက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုချဖို့ပဲ မလောပါနဲ့)(၃) ပြောရင်လည်း နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မမေးပါနဲ့တော့!
(၄) မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထပ်ထပ်ပြောထားရက်သားနဲ့….. လုပ်ထားတာတွေကလည်း မကောင်းဘူး။
(မိဘတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အရာတွေကို သိမ်းထားချင်တတ်ကြတယ်။ သူတို့သိမ်းထားတာတွေ တစ်အိမ်လုံးပြည့်နေပါစေ… နောင်တချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝက ဝတ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ့မိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာကြည်နူးကြဦးမယ် မဟုတ်ပါလား! )
မူရင်း — http://share.youthwant.com.tw/sh?id=31023426&do=D
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်ပါ။
ကျွန်တော့် ခံစားချက်ကို သုံးသပ်တင်ပြရရင်….
မိဘတွေကို စိတ်ထိခိုက်စေမဲ့ စကားတွေ မပြောမိအောင် ထိန်းတတ်ဖို့သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်ရှေ့ မှာ မိဘကို မရိုမသေ ပြောဆိုဆက်ဆံတာ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ကရိုသေပြမှ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က လေးစားမှာပေါ့။
သား၊သမီးတွေ၊ ချွေးမ သမက်တွေရှေ့ မှာလည်း မိဘကို
မရိုမသေ ပြောဆိုဆက်ဆံတာ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။
သားသမီးတွေ၊ ချွေးမ သမက်တွေ ကပါ ဖိုးဘွားတွေကို မရိုသေတဲ့အပြင်
မိဘတွေကို မပြောသင့်တဲ့ စကား(၁ဝ)ခွန်း မကရှိပါတယ်။
ကိုယ့်မိဘ ဘာကိုမကြိုက်သလဲ။ ဘာပြောရင် စိတ်ထိခိုက်သလဲဆိုတာ ကိုယ်အသိဆုံးပါ။
ဒါတွေမလုပ်မိဖို့ က ကိုယ့်တာဝန်ပါ။
အိပ်ယာဝင်တိုင်း ငါ့မိဘကို ငါဘာတွေမပြောဆို၊မဆက်ဆံသင့်တာ လုပ်မိခဲ့သလဲလို့ 
နေ့ စဉ်မပျက်ပြန်တွေးပြီးမှ ဦးချကန်တော့ရင် နောက်နေ့ သစ်မှာ ကံကောင်းကြမှာပါ။
the best ရေ….
အသိ လေးကတော့ ကောင်းပါတယ်….
လူဆိုတာ အသိတင်မကဖူး သတိလေးနဲ့ ပါ အသိအတိုင်း လုပ်ဖို့ တော့လိုတယ်ဗျ….
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တခါတခါ သတိမကပ်လို့ပြောမိဆိုမိတာတွေ ရှိပါတယ်…….
မှားတာကို မှားမှန်းသိပီး ပြင်ဆင်ခြင်းဟာလည်း မင်္ဂလာ တပါးပဲ မဟုတ်လားဗျာ….
အမှန်ပါဗျာ…တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်လဲပြောမိပါတယ်… ဒါပေမယ့် အခု အတတ်နိုင်ဆုံးမပြောမိအောင်နေတယ်… မိဘကျေးဇူးရှိတယ်လေ.. သူတို့တတ်လို့ သိလို့ ကိုယ်တွေကိုတောင် ဒီအရွယ်ထိမွေးပေးထားပြီးပြီပဲ… ကိုကပိုသိချင်သိမယ်.. ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ ကိုတော့ဘယ်လို့မှမမှီနိုင်ဘူးလေ…
မှန်ပါတယ်..။ အဲလို မျိုးမပြောဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ..။။
ကျွန်မ က တော့ တစ်ခါမှ အဲလို မပြောဖူးဘူးလို့ ထင်တယ်မှတ်မိသလောက်လေ..။ ငယ်ငယ်တုန်းက အရွယ် ရောက်တဲ့ အထိ အမေ့ကို အရမ်းကြောက်ခဲ့ရလို့လား မသိဘူး..။ အမေ့ပြောစကား တစ်ခွန်းပဲ..။ အသက်အရွယ်လည်း ၂၀ ကျော်လာတော့ ပိုလို့တောင်မပြောဖြစ်ဘူး..။ အမေ့ ကို မကြောက်တော့ပေမဲ့ အမေ့ ကို ပိုနားလည် လာတယ်..။ ကျွန်မ ကြောင့်အမေ တစ်ခုခုခံစား ရမှာ ကို ကြောက်လာတယ်…။ ကျွန်မ အမေ့ကို စိတ်ချမ်သာ အပြည့်အ၀ပဲ ပေးချင်နေတယ်…..။ ကျွန်မ နှလုံးသား ကိုသောခတ်ပြီးတော့ အမေ့ စိတ်ချမ်းသာ မှုကို ပဲ ဦးစားပေးခဲ့တာပါ..။
အမေကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာတော့ အမှန်ပါ….. အမေ့စကားကို အမြဲနားထောင်ရင် မှန်မယ် မဟုတ် မှားမယ်လို့ လည်း ကျွန်တော်လည်း မပြောချင်ပါဖူး……
ဒါပေမယ့် နှလုံးသားနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဦးနှောဏ်နဲ့ ယှဉ်တွဲပီး ပိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်…..
မိဘ ဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တဂိုဏ်းတည်း ထားပြီး ကိုးကွယ်ရတဲ့သူတွေပါ ….
ငယ်ငယ် ကတည်းက ခုချိန်ထိ ပြန်ကိုမပြောဖူးပါဘူး..
စိတ်ထဲ မှာ မိဘတွေပြောလို့ စိတ်ခုခဲ့ရင်တောင်ငြိမ်ပြီးတစ်ယောက်တည်းကောက်နေတတ်တာ..
အဲဒါလည်းမိဘကို ဆန့်ကျင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲလားမသိဘူေးနာ် ..
အဲလိုကောက်နေတာတောင် ငါ့သမီးလေးကောက်နေတာလေ..ကြည့်ပါအုံးလို့ ပြူံးပြီး ဂုဏ်ယူနေတတ်တဲ့ မေမေကို
အရမ်းချစ်ခဲ့တယ်… ဖေဖေဆို မုန့်ကျွေးပြီး ချော့တတ်တယ် ..
အဲလို သားသမီး အပေါ်ဂရုဏာထားတတ်တဲ့ မိဘများကို ဘယ်လိုများပြန်ပြောသင့်ပါမလဲ …
မိဘတွေ ရဲ့ ရင် ထဲ က စေတနာ တွေ ကို သားသမီး တွေ အနေနဲ့ မြင်အောင် ကြည့် နိုင်ဖို့ ဆို တာ၊
ကိုယ် ကို တိုင် မိဘ ဖြစ်လာ တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် ခု လို သတိချပ် စေ ဖို့ စာသားလေးတွေ နဲ့ ကြုံ ကြတဲ့ အခါ ပို ပြီး သိနား လည်၊ မြင်လာကြရတယ်။
လူတိုင်းတော့ မဆို လို ပါဘူး၊ တချို့ သားသမီးတွေ အရမ်း ကို လိမ်ကြတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်… မိဘဟာသားသမီးအပေါ်မှာ မကောင်းတာကို ၉၀% မညွှန်ပြဘူးလို့ပြောလို့ရပေမယ့်…
ကျန်ရှိသော ၁၀% မှာ မိဘရဲ့ပညာအရည်အချင်း၊ မိဘရဲ့အဆိုးအကောင်းခွဲခြားနိုင်စွမ်းနဲ့ မိဘရဲ့အတွေ့အကြုံအတိမ်အနက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်…
ခေတ်စနစ်ကြောင့် အတွေးအခေါ်နဲ့ အမြင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလဲ ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်ပါ…
အဲဒီတော့ အခြေအနေတွေနဲ့ စနစ်တွေပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ အတွေ့အကြုံဆိုတာထက် ပိုမိုပြီးလက်တွေ့ဆန်ဆန်တွေးခေါ် နိုင်မှုကအရေးပိုကြီးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်…
ဥပမာ… ကျွန်တော့အမေဟာ တစ်သက်လုံးကျောင်းဆရာမလုပ်လာတဲ့သူပါ… အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့လုံးပန်းရသူမို့ အိမ်နဲ့ကျောင်း၊ ကျောင်းနဲ့အိမ် ကူလူးရင်း အနှစ်(၃၀)ကျော်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့သူပါ… အမေ့မှာ သားသမီးကို ၁၀၀% ချစ်တဲ့စိတ်ရှိပေမယ့်… သားသမီးရဲ့ခေတ်သစ်အတွေးနဲ့ အမြင်အပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးနိုင်လောက်အောင် အနေအထားမရှိသူဖြစ်နေပါတယ်… အဲဒီတော့ တစ်ချို့တစ်ချို့သော အမေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ သားသမီးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်မှာပါ…
အဲဒါကတော့ မိဘကျေးဇူးသိတတ်ပြီး မိဘကိုအမြတ်တနိုးချစ်တတ်မှု ၅၀%၊ မိဘရဲ့လုံခြုံသောရင်ခွင်ကိုစွန့်ခွာရဲသောသတ္တိမရှိမှု ၅၀% ပါ… အဲဒါဆို မိမိက ဘယ်ဘက် ၅၀%ပေါ်ရောက်နေလဲဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက မိဘကို အကြောင်းမဲ့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်းပြောတာတော့ ကျွန်တော်လဲ မကြိုက်ပါဘူး…
ဒါပေမယ့် မိဘမှားနေတဲ့နေရာမှာ မိဘမို့လို့လုပ်ချင်ရာလုပ်လွှတ်ထားတာတဲ့ မှားနေတာကို မှားနေတယ်လို့ပြောရဲတဲ့သတ္တိရှိရပါ့မယ်…
မိဘမှားနေတာကို မှားနေတယ်လို့မပြောတာလဲ မိဘကိုခွေးစားစားကျီးထိုးထိုးပစ်ထားတာနဲ့အတူတူပါပဲ…
အဲဒီတော့ ပြောစရာရှိရင် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်ယူရင်…
အကြောင်းမယ့်ကိုယ့်ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရော… မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာပါ…
စိတ်တူ ကိုယ်တူ ပါပဲဗျာ……..
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က မိဘကို ထောက်ပြလို့မိဘက စိတ်ဆင်းရဲသွားတာ အားငယ်သွားတာလေးတွေ ရှိတက်သဗျ……
အဲ့ဒီအခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားငယ်သွားတက်တဲ့ မိဘတွေကို ချစ်သူ ရီးစားထက် မနည်း ချော့တက်ဖို့လိုကြောင်း ဖြည့်စွက်ပါရစေ…….
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့.. ဘုရားနဲ့မိဘ..တဂိုဏ်းထဲလို့.. ဟောခဲ့….ပြောခဲ့ပုံမရပါဘူး..
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ.. လူ့ယဉ်ကျေးမှုအပါအ၀င်..လူသားတွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ.. သားသမီးတွေက.. မိဘတွေထက်… (ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ ခြုံကြည့်ရင်) သာလွန်ကြလို့ပါ..။ အတိဇာတ လို့ခေါ်ပါမယ်..။
အ၀ဇာတ ( မိဘထက်နှိမ့်ကျသော သား ၊ သမီး )
အနှဇာတ ( မိဘနဲ့တန်းတူညီသော သား ၊ သမီး )
အတိဇာတ ( မိဘထက်အရာရာ သာလွန်သော သား ၊ သမီး )
မိဘတွေကို.. မိဘအရာမှာထား.. ထိုက်သင့်တဲ့.. အပြန်အလှန်လေးစားမြတ်နိုးမှုဖြင့်.. စောင့်ရှောက်ကြစေလိုကြောင်းရယ်ပါပဲ..
comments တွေဖတ်ရတာ ကောင်းသဗျာ။ စိတ်ကြည်နူးမိပါတယ်။ မိဘကျေးဇူးကို သတိရရင်/မိဘကိုစိတ်ထဲက ဦးချကတော့ရင် ဘ၀မှာ အများကြီးအဆင်ပြေလေ့ ရှိတာတော့ ကြုံဘူးတယ်ဗျာ။ တိုက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မိဘက သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့စိတ်က တစ်ခါတစ်ရံ သားသမီး အမှုတွေ ဆိုင်ရတဲ့ အထိ မှားတာမျိုး လဲတွေ့ဖူးပါတယ်
အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တာမို့ ၂ဘက်ပြေလည်အောင် သားသမီးဘက်က အလျှော့ပေး ညှိနှိုင်း ပြောဆို ဆောင်ရွက်ရမှာပါ
ကိုယ့်အတွက် အံကိုက်ပေးလိုက်တဲ့ ဆုံးမစာလို့ ထင်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမပြီး တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပေမယ့် မကြာခဏပဲ မှားတတ်နေလို့…
အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တာမို့ ၂ဘက်ပြေလည်အောင် သားသမီးဘက်က အလျှော့ပေး ညှိနှိုင်း ပြောဆို ရင်း သာယာပျော်ရွှင်စရာ ဖြစ်ရတာပေါ့
လက်ဦးဆရာမည်ထိုက်စွာ ပုဗ္ဗစရိယမိနှင့်ဖ ဆိုတဲ့အတိုင်းလည်း မိဘများဟာ သားသမီတိုင်းရဲ့ ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို ပို့စ်လေးတွေ ကွန်မန် လေးတွေဖက်ရ တကယ်ကိုသဘောကျမိပါတယ်။
မိဘကိုဘယ်လိုပဲကျေးဇူးကန်း အကောင်းမမြင်နေတဲ့ သားသမီးတွေရှိနေခဲ့ပါစေ။ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာ မိဘ နှစ်ပါးကမွေးထုတ်ခဲ့လို့သာလူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါ။ မြင့်မိုရ်တောင်ဦးမြင့်ခေါင်းကျူး ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အထူးသိလျှက်မိဘစက်။
ဖုန်းပြောတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့
အရင်တုန်းက ကျနော် အဲ့ဒီလို ပြုမှုခဲ့ဖူးပါတယ် ..
သို့ပေသိ ခုနောက်ပိုင်းမျာတော့ လိမ္မာသွားပါပီ …
အဲဒီလို မိဘကို ပြန်ပြော တဲ့ သားသမီးတွေ ဟာ ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် ကိုယ့်သားသမီး က ကိုယ့်ကို အဲဒီလို ပြန်ခံ မပြော နိုင်တဲ့ အဆင့် ကို ရဖို့
ကြိုတင် ကြိုးစားဖို့ အသိရှိ သင့်တယ်။
မဟုတ်လို့ ကတော့ အဲဒီလို သူမျိုးတွေ က ကိုယ် အပြောခံရရင် သူများထက် ပိုပြီး ဆိုး (ဂေါက်) တတ်တယ်။
ဒီ (၁) က (၁၀_ အထဲမှာ တစ်ချို့ အချက်တွေ ကတော့ မပြောသင့်ပါဘူး။
တစ်ချို့ အချက်တွေ ကတော့ မိဘများ ကလဲ ကိုယ့်သားသမီး အရိပ်အခြေ ကို သိသင့်တယ်။
ဥပမာ – တစ်ချို့ မိဘများ ဟာ အခန်းရှင်း သလို နဲ့ စပိုင် လုပ်တတ်တာ သားသမီး က သိလို့ပါဘဲ။
တစ်ခုခု ကို ကိုယ်သိချင်ရင် ကလေး နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
သူတို့ ကို မယုံကြည်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဒီတော့ မိဘများဘက် ကလဲ ဆင်ခြင်သင့်တာတွေ ရှိပါတယ်။
မိဘများ နဲ့ သားသမီးများ ဆက်ဆံရေး အနုပညာ ဟာ လွယ်လွယ်တော့ မဟုတ်တာ
ကိုယ်က သားသမီး လဲ ဖြစ်ဘူး၊ မိဘလဲဖြစ်ဘူး ပြီမို့ ကိုယ်တွေ့ပါ။
ကြောင်ဝလေး ကို ပေးတဲ့ BC အတွက် ထောက်ခံပါတယ်။ :-)